मनोरन्जन Archives - Page 86 of 91 - TajaKhabarTV
चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’ मा लाउरेले हाने यस्तो बवाल र्‍याप ! (भिडियो सहित)
२०७४, १६ भाद्र शुक्रबार १३:०७ September 1, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौं । आगामी भदौ २३ गते प्रदर्शन हुन लागेको प्रतिक्षित चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’को २ रुपैयाँ बोलकै गीत सार्वजनिक भएको छ । सङ्गीतकार रोहित शाक्यद्वारा सिर्जित तथा निर्मित गीतमा चर्चित र्याप गायकहरू लाउरे र एड्रेले स्वर दिएका छन् । गीतसँग–सँगै म्युजिक…
यसरी जातिय कुरा गर्नेलाई गायक राजेश पायल राई हाने गतिलो झापड (भिडियो सहित)
२०७४, १६ भाद्र शुक्रबार ११:५१ September 1, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाण्डौ । नेपाल आईडलको चौथो राउण्डमा गेष्टको रुपमा बिहीबार नेपाल आईडलको मञ्चमा पुगेका राईहरुकै राई ईज किंगका उपाधि पाएका गायक राजेश पायल राईले खुलेरै रामकृष्ण ढकालको पक्षमा बोले । उनले नेपाल आईडलको मञ्चबाटै गायक ढकाल र आफु निकै मिल्ने साथी…
नेपाल अाइडलबाट अाज को अाउट हुन्छ ? बाहिरियो भोटिङ नतिजा (भिडियो सहित)
२०७४, १६ भाद्र शुक्रबार ०९:०१ September 1, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौ । नेपाल अाईडलमा अब मात्र ४ जना प्रतियोगिहरु बाँकी रहेका छन् । बिहीबारको एपिसोडमा चारै जना प्रतियोगिहरुले उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएका छन् । उनिहरु दुई दुईवटा गित गाएका थिए । नेपाल अाइडलका प्रतियोगिको हौसला बढाउन चर्चित गायक राजेश पायल राई…
यसरी न्यु बज्राचार्यले दिए क्याप्टेन बिजय लामालाई गतिलो जवाफ (भिडियो सहित)
२०७४, १६ भाद्र शुक्रबार ००:३९ September 1, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
२०७४, १५ भाद्र बिहीबार २०:४३ September 8, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौ । एपिवन टेलिभिजनमा प्रसारण भईरहेको नेपाल अाईडल अब तपाईले प्रत्येक हप्ता हाम्रो वेबसाईटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। लाईभ भिडियो हेरौ टप ४ मात्र बाँकी रहँदा देशमा यतिबेला नेपाल आईडलको निकै चर्चा छ । धेरैको छनौट पछि ४ जना फाईनलमा प्रवेशका…
बुद्ध लामा भोटमा कमजोर बन्दै छ, परीवार भन्छन : ‘बाहिरबाट आएको १ लाख मात्र हो’ (भिडियो)
२०७४, १५ भाद्र बिहीबार १८:५३ August 31, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौं । नेपाल आइडलका प्रतिष्पर्धी बुद्ध लामाको पारीवारीक स्रोतले आफुहरुले बुद्धलाई दश हजार बराबरको मात्रै भोट गर्ने गरेको बताएका छन । बुद्ध लामाका लागी भनेर बिदेशमा रहेका आफन्तबाट अहिले सम्म एक लाख रुपैया मात्र आएको पनि बुद्धकी दिदी आचल लामाले…
दक्षिणी भारतीय फिल्म ‘विवेगम’ले तोड्यो बहुचर्चित ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड
२०७४, १५ भाद्र बिहीबार ०९:२३ August 31, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
एजेन्सी । दक्षिण भारतका सुपरस्टार अजीत कुमारको तामिल फिल्म ‘विवेगम’ ले वर्षकै उत्कृष्ट फिल्म ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड तोड्दै व्यापार गरिरहेको छ । फिल्म रिलिज भएको ४ दिनमै यसले पुरानो फिल्मको रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको हो । फिल्मले…
देखियो यस्तो, बुद्धको नाम लिदै सागर र निसानलाई भोट ( भिडियो)
२०७४, १४ भाद्र बुधबार २३:३८ August 30, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौ । नेपाल आईडलका उत्कृष्ट प्रतिष्प्रर्धी हुन् बुद्ध लामा । पोखराका बुद्ध लामा कला र गलाले भरिपूर्ण ब्यक्ति हुन् । पोखरा बुद्ध लामालाई नेपाल आईडल बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । तर बुद्ध लामा मात्र आईडलका दाबेदार होईनन् । प्रदाप…
नेपाल आइडलका विषयमा रामकृष्ण ढकालको विपक्षमा क्याप्टेन विजय लामा
२०७४, १४ भाद्र बुधबार २३:२८ August 30, 2017 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौ । एपी वान टेलीभिजनबाट प्रसारण भइरहेको रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ को अहिले जताजतै चर्चा भइरहेको छ । जति जति फाइनल नजिकिँदै छ त्यती नै यसको चर्चा पनि चुलिँदै गएको छ । गत शुक्रबारअतिथी निर्णायकका रुपमा आइडलमा पुगेका रामकृष्ण ढकालले…